Ruxitaanka Xoogga leh - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadaagga ah
Bogga ugu weyn/updates/Ruug cadaa xoog badan
Bishii Janaayo 7-deedii, 2020, dhulgariir culeyskiisu yahay 6.4 ayaa ku dhuftay Puerto Rico, kaasoo sababay waxyeelo baahsan oo ka dhacday koonfurta oo si kumeelgaadh ah u jartay jasiiradda oo dhan. Waxaa jiray kumanaan dhulgariir iyo gariir bilaabmay dabayaaqadii bishii Diseembar 2019 iyo ilaa iyo maanta ilaa koonfurta Puerto Rico. Waxa jiray mar ay guryahooda iyo dukaamada maxalliga ahi ahaayeen tuubbo burbursan, barakicin in ka badan 8,000 oo qof. Boqolaal xeryo ah ayaa buux dhaafiyay guryahooda hortiisa dadkii hore iyo meelaha banaan ee u dhaw.
Guanica, oo ka mid ah xuduuda dhulgariirrada, waxay ahayd goobta ciidamadii ugu horreeyay ee Isbaanish ee Boriken. Ponce de León waxay timid Guánica Bay sanadkii 1508. Degitaankeedii asalka ahaa waxaa lagu burburiyey Kacdoonkii Taíno ee 1511. Mareykanku wuxuu sidoo kale degay halkan 1898, wuxuuna keenay waji cusub oo gumeysiga. Maanta, guddi kontaroolayaal maareyn ah oo la soo xulay, PROMESA, ayaa ku soo rogay gacan ku haynta jasiiradda oo dhan isla markaana lacagta Puerto Rico ay siineyso maal-gashadayaasha maal-gashadayaasha si ay u bixiyaan deynta deynta ah. Iyo dadka ku nool Guanica waxay ka digayaan in guryaha ka badbaaday dhulgariirku ma sii noolaan karaan qorshooyinka hudheellada raaxada, muddo dheerna liiska liistada ee horumariyeyaasha gobolka.
Laakiin dadka Puerto Rico waxay ka ogaadeen Hurricane Maria, "Solo el pueblo salva al pueblo" - dadka kaliya ayaa badbaadiya dadka.
Waqti looma luminin sugitaanka dowladda ama hay’adaha waaweyn. Dadka jasiiradda oo dhami waxay isla markiiba abaabulayeen maraakiibta iskood isu xilqaan, ee iskood u madaxbannaan si ay u keenaan badaha sahayda oo ay kaafiyaan baahiyaha aasaasiga ah ee dadka ku nool koonfurta. Markay hadal soo baxday sahaydu waxay ahaayeen wareegayaa bakhaarradii dawladda illaa Hurricane Maria, dadku waxay ku tureen tiro waxayna ka codsadeen.
Guutooyinka midnimada ayaa sii waday, sida shaqada dhiirrigelinta leh Brigada Solidaria del Oeste. Shabakada xarumada gargaarka ee jasiiradda ayaa ku soo rogtay qalab aad u sarreeya waxayna la kulmayeen baahiyaha dadka koonfurta ku sugan ay si toos ah u saameeyeen dhulgariirrada si sharaf iyo naxariis leh.
Waxaan nasiib u helnay qayb yar oo ka mid ah garoonkan, dhaqdhaqaaq sii kordhaya oo u adeegsanaya is-caawinta dhammaadka iyo qaababka xoreynta wadajirka ah. Qeybinta teendhooyinka, joodariyaasha, shooladaha kaamamka, iyo baytariyada iyo dhisida qubeyska qubeyska waxay u egyihiin waxyaabo yaryar oo fudud. Waana Laakiin waxaan sidoo kale dareemeynaa in qaabkan aan iskula xiriirno, jajabinta derbiyada na kala qeybinaya, u orodka dhibaatada halkii aan ka carar laheyn, gacmahayaga u dhiibno iyo waxa ay aruurin karaan, iyo in lala wadaago sharaf iyo sinnaan - cidna kama sareyso , ma jiro qof ka hooseeya, oo noo jiidaya halka aan dooneyno inaan joogno.
Waqtiyadeenii oo dhan halkaan, waxaa iska cadahay in dadka ku nool Mareykanka intiisa kale ay wax badan ka baran karaan Puerto Rico, in fahamka dalabkeenna dalabkeenna midnimo iyo iskaashiga labada dhinac ah lagu soo koobay halkan aad uga fog halka ay ku leedahay Gobollada . Qof kasta oo halkan u imanaya inuu sameeyo shaqo wada jir ah waa inuu fahmaa in dadka Puerto Rican ay khabiir ku yihiin mowduuca - halka kuwa kalena laga yaabo inay keensadaan qaar ka mid ah xirfadahooda gaarka ah ama khibradooda ama kheyraadkooda, had iyo jeer waa lagama maarmaan in waxyaalahaas wax loogu qabto Puerto Rican. aragtidooda waxa ay dhisayaan.
Waraysi qoto dheer oo ku saabsan xaalada dhulgariirkii ka dhacay Puerto Rico, fiiri Martin iyo Pluma oo ku sugan goobta ka soo baxa! iyo wareysigani wuxuu ka socdaa Hoos U Dhac: “Dhimbiiltiiba waa durbadiiba & ololkii ayaa socda”: Inta udhaxeysa Shell-ka Gobolka & Kobaca ismaamulka Puerto Rico.
Sameynta shaqada gargaarka labada dhinac ayaa ah abuurida abuurka xididdada oo hoos udhici doona qalcadda. Tan waxaa si cad looga dhex arkay Puerto Rico, oo ah meeshii ay ka bilaabatay sidii iskii isu abaabulay ee loogu jawaabi lahaa musiibooyinka jir ahaan ku koray oo lagu quudiyey abaabulka iyo kacdoonkii keenay gudoomiyaha, mar labaadna ay yihiin kuwa dhulka hoostiisa maraya.
Meel ayaa laga tuuray si aan u aaminsanaano in gobolka iyo hoolalka siyaasada iyo dhaqaalaha ay yihiin halka awooddu kujirto. Laakiin higsigaas ayaa burburay. Waxaan joognaa meel walba. Suurtagalnimada iyo awooda lagu dhaqmayo waa gudaheena iyo dhammaan agagaarahaaga. Waxaan badbaadin karnaa dhismooyinka faaruqa ah waxaanna ka dhigi karnaa xarumaha gargaarka wadajirka ah oo leh xarumo caafimaad, xarumo caafimaad, xarumo kombiyuutar, jardiinooyin, maktabado qalab, dharka dhaqashada, farshaxanka farshaxanka, ama wax kasta oo bulshada ay aad ugu baahan tahay. Waxaan dhisi karnaa kaabayaasheena gaarka ah si aan ugu kalsoonahay kuwa ina dulma. Waxaa jira quwad aad u xoog badan marka loo eego taangiyadooda iyo dayuuradaha dagaalka.
Gumeysiga, marka lagu daro soosaarka aan naxariis lahayn ee hantida laga helo saboolka, madow, iyo bunni ee taajiriinta iyo caddaanka, waxay kaloo ka kooban yihiin xabsiyada maskaxda ee lagu soo rogo dulmiga iyo dulmiga labadaba. Si looga gudbo caqabadahaas qayb ka mid ah jawaabta ayaa laga yaabaa inay iska eegto dibedda ka eeg annaga iyo bulshooyinkeenna, adoo aqoonsanaya isku xirnaanta halganka dhow iyo tan fog.
Sidee qofku u ruxaa silsiladaha aan muuqan?
Sidan oo kale, asxaabta.
Sidaan oo kale.
2020-03-01T13:12:01-05:00March 1st, 2020|updates|